Dawladnimadeeni waxay ku luntay jibo“ Faysal Cali-waraabe | Berberanews.com
Home WARARKA Dawladnimadeeni waxay ku luntay jibo“ Faysal Cali-waraabe
Dawladnimadeeni waxay ku luntay jibo“ Faysal Cali-waraabe
Hargeysa-(Berberanews)–Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng:Faysal Cali Waraabe iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey madaarka magaalada Hargeysa ka dib markii uu safar shaqo ugu tagay dalka Burundi.
Dadweyne ka kala yimid xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa si balaadhan ugu soo dhoweeyey gudoomiye Faysal, waxaana iyaguna qayb ka qaatay xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI iyo madaxdiisa oo ka mid ahaa dadkii faraha badnaa ee soo dhoweynayey.
Musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID Prof Abyan ayaa sheegay in madax ka tirsan dalka Burundi si fiican usoo dhoweeyeen, waxaanu sheegay inay la kulmeen madaxweyne ku xigeenka dalkaasi, kuwaas oo u sharaxaya Somaliland iyo qadiyadeedda.
Sidoo kale, waxa uu u mahadnaqay dadweynaha faraha badan ee soo dhoweeyey weftiga uu hogaaminayey Faysal Cali Waraabe.
Sidoo kale, waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye Faysal Cali Waraabe, waxaanu dhaliilo usoo jeediyey xukuumadda iyo madaxweyne Biixi.
“Dawladnimadeeni waxay ku luntay jibo, dad aynaan is aqoonin hore dhaqan u wada lahayn oo ganacsi u wada lahayn oo la yidhi soomaali weeyi ayeynu dawladeenii u dhiibnay, maalintaasi ilaa maalintii dagaalku dhacay waynu sii fool xumaanaynay, wax dawladnimadii lixdankii helnay inoogu kordhay ma jiraan, waxaynu ku heshiinay in dalkeeni soo ceshano iyo in aynu isa saamaxno iyo in dawlad la wada leeyahay oo cadaalada samaysanno.”
Mar uu nidaamka dalka lagu hayo tilmaamayey waxa uu yidhi “Dalkeenu badbaado ayuu u baahan yahay Inaga iyadoo cidiba inoo iman ayeynu gudaheena ku dumaynaa, hada waxa Somaliland ku socda cago juglayn, hanjabaad, waxa imika isku darsamay baarlamankii, garsoorkii iyo fulintii oo mid wada noqday, wada lahaanshihii oo gees u raran. Doorasho waa inay dhacdaa, maalintii la balansanana waa baritoole ma ogolaanayno inuu fadhiyo baarlaman aan sharci ahayn, gole deegaan aan sharci ahayn, guurti aan sharci ahayn.”
Maalmihii u dambeeyey waxa la hadal hayey in dacwad ka dhan ah gudoomiye Faysal Cali Waraabe ay taallo xeer ilaalinta, haseyeeshee gudoomiye Faysal arrintaasi ma soo hadal qaadin.
Previous articleIran oo diiday in ay wareejiso sanduuqa madow ee keydiyay xogta diyaaradii burburtay
Next articleMuuse Biixi oo kulan La Yeeshay Wakiilka Qaramada Midoobay U Qaabilsan Somaliland Iyo Soomaaliya